Itoobiya halkee loo wadaa, amase ay u socataa?!!! - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
Itoobiya halkee loo wadaa, amase ay u socataa?!!!
June 13, 2018 | Filed under: MAQAALLADA | Posted by: Caasimada Online
Maalin dhowoyto, Websiteka la yidhaa TANADEEM ayaa gogol u fidiyey gabadha uu dhalay kaligii taliyihiii Mengistu Xayle Mariyam, oo magaceeda la yidhaa Tigist Mengistu.
Tigist oon ku soo laaban doono qaybahayga dambee ee qoraalkan waxay baaq u dirtay shacab-weynaha Itobiya iyo xoogaga mucaaridka ah (Itobiya andinet), waxaanay kula dardaarantay in ay dalka xoreeyaan. In ay ka xoreeyaan gumeystaha iyo “qaran diidka,” waa sida ay u dhigtee.
Waa arinta igu dhalisay in aan qaato mawduucan ah Itoobiya halkay u socotaa, amse halkee loo wadaa? Balse mililicsi gaaban oo ku aadan tarrikhda gaaban ee itobiyada casriga ah iga hoo!
Kadib markii Lij Ayaasu (Ilyaasiikii rer-Walo) uu inqilaabay Amir Xayle Selaasie isaga oo qabay Gabadhii Itiye Manon ooy Ilyaas walaalo ahaayeen, Itoobiya geedi ayey gashay (Ilayaas oo ah Boqorkii isku dayey in uu xidhiidh walaatinimo ah la yeesho Sayyid Maxamed C/Xasan iyo qoymiyada Soomaaliday, waxaa dhalay Maxamed Cali oo inta dagaal lagaga addkaaday diintiisii iyo qoomiyadiisiiba laga badalay). Waxaa uu u dhashay Islaamnimo iyo Waloo oo Oromo ah. Waxa uu se ku dhintay isaga oo masiixi isla markaana Amxaar laga dhigay. Amiir Mikaaeel yaa lo baxshay.
Maxamed Cali waa laa qabsaday (waxaa isugu tagay Boqoradii Kiristanka ahaa ee Yuhanis (Tigree) iyo Menilik (Amxaar). Ilyaasna isaga oo xabis (god dhulka hoostiis ku jira) oo Xayle ciqaabay ayuu geeriyooday, walaashiisna caruur dhowr ah oo noqday dhaxaaltooyo sugayaal ayey u dhashay.
Mar hadii mu’aamarad badne Xayle la boqray (1919-1930 waxaa uu ahaa amiir; 1930 – 1974 boqorka boqorada (emperor), waxay Itoobiya gashay geedi aan dhamaad lahayn. Geedigaas waxaa uu yahay geedi la rabo in lagu casriyeeyo nidaamka dawliga Itoobiya.
Itobiya waxay tahay dal imberiyaaladi aasaastay oo hab dhanqan dhaqaaluhu yahay nadaamka hadhaaga ah ee fiyudal (feudal system). Fiyudalka waxaa astaan u ah beero qodasha ku dhisan nidaamka qaalaadka ah (Hacienda).
Waa nidaam badariyiintu, generaaladu iyo inta bortooyada ka dhodhowi ay aad u manaafacsadaan quruska beeralaydu (peasants) ay tabcadaan. Tobenkii kuntaal ee ka go’a beerta, wax aan hal kuuntaal buuxin ayaa loo reebaa shaqsigii ku tabcay beerta, inta kalena waxaa ka la qaybsada boqortooyada, generaalada, iyo kuwa kiniisada kadhodhow.
Itoobiya waxay ku soo dhaqantay xiligii boqortooyada nidaamka ugu ka kagan een naxariista lahayn ee fiyudaalka ah. Waxa uu nidaamkaasi aad u waxyeelay qoomiyada Oromooda, qowmiyadaha isutaga Koonfur Itoobiya, guraagta. Wax yeeladii xiligaas soo gadhay dakan Oromooda ugu badan weli ka mey bogsan nabar nafisigii (psychological scar) uu nidaamkaasi ku keennay.
Boqor Xayle 1948 -1952 aya isyidhii isbadal nidaamkaas ku samee. Sedex arimood ayaa u ahaa sababo ama ilays:
1. Xayle xiliyadii dagaalkii aduunyada labadad (WWII) waakii mudo gaaban (1936-1941) ku noolaa Iglan, Newbirdge, gurigii Bath house. Waxaa uu aad ugu qushuucay fahmayna in boqortooyo casri noqon karto. Kadsmbi wakhtigaas waxaa uu qoray axdi-qarameed cusub (new constitution).
2. Waxa kale uu aad wax uga bartay shahii Iraan xiligaas haystay oo isna rabey in uu casriyeeyo boqortooyadiisa. Hahaha Iran iyo Xayle saaxiib ayay ahaayeen.
3. Waxa dabada ka waday Marykanka oo lahaa casriyeed axdi-qarameedka kana gudu nidaamka fiyudalka.
Hase ahaatee laba xoog ayaa u fasixiwaayey:
1. Arinta qoomiyadaha aanu daacad ka ahayn.
2. Xoogag qowmiyaad islaweyni ku jirtay oo aad uga hor imaanayey geedi-socod kasta oo xaquuqada qoomiyadaha xoojinaya.
1960hii ilaa 1970hii waxaa boqorka nidaamkiisii saluugay Soomaali, Eriteria, Tigray, Canfar, iyo Oromo. Waxa kale oo saluugsanaa xoogaga horusocdka ah oo Iyana rabay isbedel coojiya xaquuqda beeralyda iyo qowmiyadaha.
Aritaas ayaa u horseeday ciidamadii Dhargigu in ay awooda la wareegaan. Sibabtoo ah kacaan isbadel (revolution) ion Horaeed lahay (leadership) ayaa soo foodsaaray. Xilagaa ciidamada oo kaliya ayaa urusanaa (the army was the onlyborganized entity). Aakhirto ciidamada ayaa hogaankii haleelay.
Bishii Ogasto 28, 1974 ayuu Mangistu dilay Xayle: Barkimo uu afka u saaray ayuu ku ciijiyey; si bilaa naxariis ahna wuu idilay. Halkaasna waxaa ku soo afjarmay nidaamkii fiyudaalka ahaa ee rer-boqor horseedka ka ahaayeen.
Sidaan horay u sheegay, dad badan ayaa ku xaq laa nidaamkaas, haba ugu daraadaan Qowmiyadaha Oromo, Soomaali iyo Canfartu.
La soco qaybta 2, 3, iyo 4aad. Nuxurkuna waxa uu yahay kuwa durbaanka u tuma kala saraynta qowmiyadaha Abiy iyo dawladiisa halkay ku wadaan?
Sawiradu waa Megistu, Xayle, Ilyas, askar Xayle u sujuudaysa, iyo Sayyid Maxamed
W/Q: Faysal Rooble